Ngwa ngere Eyewash, Ngwaọrụ nhicha ntutu - Bohua
Nweta akwụkwọ ntanetị na akwụkwọ eserese n'efuGaa
Shanghai Hongqiao transportation hub, the company specializes in R & D, mmepụta na ahịa nke eyewash. Site n’afọ 2004 rue ugbu a, anyị mepụtara ma mepụta usoro iri na otu na ụdị ihe eji eme nkuanya iri atọ. Anyị ahịa olu na technology dị na-eduga ọnọdụ na China. Companylọ ọrụ ahụ ejirila ISO 9001: asambodo usoro 2008 dị mma, ISO 14001: asambodo njikwa gburugburu ebe obibi 2004, OHSAS 18001: asambodo ọrụ ahụike na nchekwa njikwa 2007, nwetara asambodo nke ngwaahịa ngwaahịa China dị mma, wee merie Shanghai. Ebe E Si Nweta nzere ntozu “AAA”.
Oge gara aga Ngwaahịa
Gbaa mbọ hụ na àgwà nke anyị na-magburu onwe mgbe-sales ọrụ.
Onyinye ịsa ahụ e ...
Anya zuru ezu ...
Elu anya asacha ...
Mobile obere e ...
The ụlọ ọrụ nwere ike hazie nile di iche iche nke unconventional eyewash dị ka mkpa n'ezie nke ndị ahịa.
Antifriza Anya Washer (lie)
Antifrizi Anya Washer (Pedal Type)
Anya Roomlọ Na-asa Ahụ
Obere Anya Na-asacha Anya
Anya Saa Station
The ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 600 elu-edu mkpara, ụlọ ọrụ attaches dị oké mkpa ka otu imekọ ihe ọnụ, adabako ikuku
Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 ahụmahụ na mmepụta na nyocha na mmepe nke ngwaahịa nchebe ọrụ, na ngwaahịa eji anya anya eruo na-eduga n'ọkwa n'otu ụlọ ọrụ na China
Companylọ ọrụ nwere ihe karịrị ndị mmekọ 40,000, ọtụtụ n'ime ha bụ nnukwu mba ndị China na ụdị ndị a ma ama n'ụwa, dị ka PetroChina, Sinopec, Coca Cola, Shell Lubricants, Honeywell, wdg.
Research na mmepe nke patent
Companylọ ọrụ ahụ jikọtara nnukwu mkpa maka nyocha na mmepe yana ịkwalite ngwaahịa. Ntinye ego kwa afọ na nyocha na ngwaahịa na-akpata 10% nke ego ahịa n'otu oge ahụ.
Ọkọlọtọ ngosipụta ngwaahịa
Onyinye mberede ịsa ahụ mejupụtara
Nnukwu pedal compound eyewash
Electric kpo oku compound nkuanya
Kedu na-ekwu okwu na ndị mmadụ
Ọ bụ ezigbo ezigbo. O jiri igwe nchara 304 mee ya. Nhazi na nhazi dị ezigbo mma. Nzukọ ahụ na-achịkwa mmiri mmiri. N'adịghị ka ezinụlọ ndị ọzọ, ọ ga-ejikọ ọkpọkọ abụọ. Nkọwapụta ahụ dịkwa oke mma. Ọ bụ naanị obere efere aka na-eburu n'uche ọdịdị na mmetụta. Ọ dị mma ma dịkwa mma. Obu ihe mara nma ile anya. Nke a bụ ihe na-enye afọ ojuju m zụtara mgbe m zụtara ihe nhicha anya
Mgbe ọrụ ahịa bụ ihe kachasị mma m hụtụrụla n'etiti ndị niile na-ere anya. Enwere ike idozi nsogbu ọ bụla n'oge ọ bụla. Ndị na-ere ahịa n'eziokwu, ogo nke nku anya dịkwa ezigbo mma
Ọrụ nke ihe mberede ...
Okwu ụfọdụ chọrọ ka anyị gee ntị ...